အောင်ရဲထွေးကို သတ်တဲ့တရားခံထဲက တစ်ယောက်ကို ချောလွန်းလို့ဆိုပြီး.. ကောင်မလေးတွေ ကြွေပြနေကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေ ကြည့်ပါဦး – CantWait2Say
Myanmar New January 4, 2018
မြန်မာ သူဌေးကြီး ဦးတေဇ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
မြန်မာ သူဌေးကြီး ဦးတေဇ အကြောင်း တစေ့တစောင်း ဦးတေဇကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်ဇူလိုင်၁၈ရက်နေ့ မှစတင်မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ခုဆိုရင်တော့အသက် ၅၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဦးတေဇဟာဗမာလူမျိုးဖြစ်ပြီးထူးကုမ္ပဏီများအုပ်စုရဲ့ဥက္ကဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးတေဇကိုနိုင်ငံတော်က သီရိပျံချီဘွဲ့ ကိုပေးအပ်နှင်းထားတာပါ။ဇနီးကတော့ဒေါ်သီတာဇော်ဖြစ်ပြီး သားသမီးစုစုပေါင်း၃ဦးရှိပါတယ်။သားတွေကတော့ပြည့်ဖြိုးတေဇ,ထက်တေဇ နဲ့ သမီးဖြစ်သူရစ်ချယ်တေဇတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတေဇရဲ့မိဘတွေက အဘ ဦးမြင့်ဆွေနဲ့ အမိဒေါ်အုံးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်းညီအကိုတယောက်ရှိပြီးသီဟလို …
မန်မာ့တပ်မတော်အင်အား မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့သိသင့်တယ် တပ်မတော်မှာ စစ်ဌာနချုပ်ကြီး ၁၄ခုရှိပါတယ် ၄င်းတို့မှာ ၁။ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မြစ်ကြီးနား၊ ကချင်) ၂။ အရှေ့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (လားရှိုး၊ ရှမ်း) ၃။ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တောင်ကြီး၊ ရှမ်း) ၄။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မော်လမြိုင်၊ မွန်) ၅။ တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် …
ဆရာ ချစ်​ဦးညို ရဲ့ သက်​ဆိုင်​သူများကို ရည်​ညွှန်း သတိ​ပေးမှု
မ​လောင်​ခင်​တားကြစို့ ” ၁။ရည်​ညွှန်း။ ။ကာယကံရှင်​​ခေါင်း​ဆောင်​ကြီးများ၊ အနီးကပ်​ကာကွယ်​​ပေး​နေသူများ၊အနီးကပ်​မိတ်​​ဆွေများ၊အစိုးရအဖွဲ့ဝင်​များ၊ပြည်​သူလူထုတရပ်​လုံး၊အထူးသဖြင့်​ အဂတိ​လေးပါးမှကင်းကြ​လေသည့်​ ပြည်​ထဲ​ရေး၊ရဲ၊စစ်​တပ်​မှတာဝန်​ရှိသူများ။ ၂။ကိုယ့်​ကိုကိုယ်​ယုံလွန်းမှု၊သတိကင်းကွာမှု (က)၁၈၊၉၊၄၇. ဗိုလ်​စိန်​မှန်​နဲ့ဗိုလ်​မှူးအောင်​တို့ကဘရင်းဂန်း၂၀၀ ​ပျောက်​မှုတင်​ပြခဲ့။ပုလိပ်​မင်းကြီးဦးဘ​မောင်​နဲ့စုံ​ထောက်​မင်းကြီးဦးထွန်းလှ​အောင်​တို့ကအ​ထောက်​အထားခိုင်​လုံသဖြင့်​ဦး​စောကိုဖမ်းခွင့်​ပြုရန်​​ပြော၊ဗိုလ်​ချူပ်​​အောင်​ဆန်းက “ခင်​ဗျားတို့ပုလိပ်​​တွေကတဆိတ်​ရှိနိုင်​ငံ​ရေးသမား​တွေကိုဖမ်းဖို့ပဲ၊ကျူ ပ်​မကြိုက်​ဘူး၊​သေချာပြန်​စုံစမ်း” လို့​ပြောခဲ့။ ဗိုလ်​ချူ ပ်​​အောင်​ဆန်း။ ။ဗျာ ဒါက​တော့ဘုရား​တောင်​မှအတိုက်​အခံရှိ​သေးတာပဲ ကိုယ်​ကသာလမ်းမှန်​က​နေပြီးမှန်​တဲ့အလုပ်​ကိုလက်​ကိုင်​ထားရင်​ဘာမှ​ကြောက်​စရာမလိုပါဘူးအ​မေရယ်​။မစိုးရိမ်​ပါနဲ့ စစ်​တိုက်​​နေတုန်းက​တောင်​မ​သေခဲ့တာ၊အခုတိုင်းပြည်​နဲ့လူထုကအရင်​လိုမဟုတ်​​တော့ပါဘူး အ​ကောင်းအဆိုး​ဝေဖန်​တတ်​ပါပြီဗျ။ ၃။လက်​နက်​များထုတ်​ယူသယ်​​ဆောင်​သွားမှု ၁၉၄၇ဇူလိုင်​ဒုတိယအပတ်​ထဲမှာဘီအိုဒီရဲ​ထောက်​ပံ​ရေးဌာနမှဘရင်းဂန်း ၂၀၀ ရဲဝန်​လက်​မှတ်​အတုဖြင့်​ထုတ်​ယူသွား​ကြောင်း၁၅.၇.၄၇. …
သရဲခြောက်တယ်လို့ရာဇ၀င်ရှိခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဟိုတယ် ၁၀ခု
ကမြင်းကြောထတဲ့ နွားကြောင့် သေရတဲ့သခင်နဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ သေဆုံးမှုများ
စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်လွန်တဲ့ ကြော်ငြာဒီဇိုင်းပုံ ဖန်တီးမှုများ
ဗြိတိန်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အမျိုးသားများ အာရုံစိုက်ခံစေချင်လို့ ရင်သားကြီးအောင်လုပ်ဆောင်နေနာတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်